कोरोना भाइरसले भेट्यो भेटेन कसरी थाहा पाउने, भेटिहाल्यो भने पहिले के गर्ने ? - e-Sidha Nepal
हाम्रो संवाददाता ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:५९
अहिले कोरोना भाइरस संसारभरी फैलिएको छ । कोरोना ापुगेका देश अब केही मात्र बाँकी छन् । यो बाट विश्वभरीका मानिस डराएका छन् । यसबाट डराउनु वा आत्तिन जरूरी छैन। अहिलेको चर्चा पूर्वसचेतताका लागि हो। लक्षण पनि अरू रोगसँग मिल्दाजुल्दा छन्। त्यसकारण संक्रमण भइहालेमा पनि जीवन नै माया माया मा र्नुपर्ने हो कि भनेर सोच्नु हुँदैन।
कोरोना भाइरसका लक्षण पहिचान गर्ने, पहिचान हुनासाथ संकेत देखिएमा एकदमै सर्तकता अपनाउँने । आफुलाई हो की भन्ने लाग्नासाथ तत्काल पुरै नाक मुख ढाक्ने खालको मास्क प्रयोग गर्ने । घरपरिवारले छुने केहीपनि बस्तु सामान नछुने । हाँट्यौँ आयोभने टिस्यू प्रयोग गर्ने, टिस्यू नहुनेले कपडाका टुक्रा प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरेका कपडा खाल्डोमा राखेर माटोले छोप्ने । तातो, रसिलो, पोसिलो, झोलीलो कुरा खान थालि हाल्ने ।
अनि सबैसँग सहयोग लिएर कहाँ कुन अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड सहितको उपचार गर्ने व्यबस्था छ त्यो अस्पतालमा गइहाल्ने । त्यहाँ गएपछि गाह्रो पो हुने हो की भन्ने कहिलै महसुस नगर्ने । यो भाइरसले केबल ज्वरो, रुघा, खोकी मात्र दिने हो अरु कुनै असर छैन । यति बेलैमा होस् पुर्याए । सम्बन्धित असरलाई कम गर्न अस्पतालमै बसेर औषधी सेवन गरे करिब १४ दिन भित्र निको हुनेछ । यो भाइरस १४ दिनपछि शरिरबाट आफै हटेर जान्छ ।
शुरूमा ३०–४० जनामा देखियो। पछि यो तीव्ररूपमा फैलिंदै गयो। त्यतिबेलासम्म यसलाई चाइना भाइरस, हवान भाइरस, ह्युवान भाइरस, वुहान निमोनिया भाइरस भन्दै विभिन्न नाम दिइयो। पछि परीक्षण गर्दा यो कोरोना भाइरसबाट निस्किएको रहेछ। तर, पहिले देखिएको सार्स र मर्स कोरोना भाइरसभन्दा धेरै फरक रहेछ। पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नोबेल कोरोना भाइरस भन्ने नाम दियो। अहिले यो भाइरस तीव्र गतिमा फैलिँदै अमेरिकासम्म पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन अवस्था भनेर घोषणा गरेको त छैन। तर, विश्वव्यापीरूपमै सचेत रहन आग्रह गरिसकेको छ। र, यो भाइरसबाट प्रभावितहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ।
ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने अरू रोगका लक्षण पनि हुन सक्छन्। यो चिसोमा सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना भाइरस लाग्यो कि भन्ने डर मानिसमा देखिन्छ नि !
यसको उपचार कति महँगो छ ?
मैले यसलाई फ्लू जस्तै लिन्छु। डेंगीको जसरी उपचार गर्‍यौं, त्यसरी नै यसको पनि लक्षणको आधारमा उपचार गर्ने हो। यसबाट झण्डै दुई प्रतिशतका हाराहारीमा मृत्यु भएको छ। यो भनेको निकै कम दर हो। यो पनि हुनु हुँदैन तर, अन्यको तुलनामा यो मृत्युदर कम हो। अहिले पनि मर्स भाइरसबाट १०० मा ३५ जना मर्छन् भने कोरोना भाइरसबाट १०० मा दुईजना मर्छन। तर, यो भाइरस नयाँ भएका कारण यसको चिन्ता र चर्चा बढी भएको हो।
स्याङ्जामा २२ सहित गण्डकीमा थप ३७ जनामा कोरोना